Home AKWOTKWỌ AKW CLKWỌ AKWASKWỌ Sunday Oliseh Child Story Plus Ihe na-emeghi ihe omuma
AKWOTKWỌ AKW CLKWỌ AKWASKWỌ
LB na-egosi Full Story of a Legend of Nigerian Legend, onye aha ya kacha mara; "Onye Nkụzi Ukwu". Ụbọchị Sunday anyị na-eto eto Akụkọ nke a na-eme ka ị nweta akụkọ zuru ezu nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge. Nyocha a na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ ezinụlọ ya na ọtụtụ nkwụsị na ON-Pitch amaghị ihe banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere égbè eluigwe ya na 1998 World cup egwuregwu megide Spain, ma ole na ole tụlee Sunday Oliseh's Bio nke bụ ihe na-adọrọ mmasị. Ugbu a n'enweghi adieu ọzọ, ka anyi bido.
Sunday Oliseh Child Story Plus Ihe na -Ndụ mbido
Sunday Ogochukwu Oliseh a mụrụ na 14th ụbọchị Septemba 1974 na Abavo, Delta State, Nigeria. A mụrụ ya na ndị nne na nna ya bụ ndị Katọlik Mr na Mrs. Oliseh. Nna ya bụ onye na-akwụ ụgwọ, ebe mama ya bụ nwanyị azụmahịa azụlaahia.
Oliseh malitere ịkụ bọl site na oge ọ pụrụ ije ije na obodo Abavo, Delta State. Ya na ụmụnne ya (ụmụ nwoke 6 na nwa nwanyị 1) na Lawanson, Surulele, Lagos State. N'okpuru bụ foto nke Sunday na nwanne ya nwoke okenye.
Sunday Oliseh nwere ihe nkuzi ya na Bright Starr Nursery na Primary School (Ojota). Maka ụlọ akwụkwọ sekọndrị ya, ọ gara ụlọ akwụkwọ High School Ajao (Anthony Village) na ụmụ akwụkwọ Metọdist High School, niile na Lagos State, Nigeria. Ụlọ akwụkwọ ndị a nyere ya ohere ịme egwuregwu bọl na-asọ oyi n'oge oge egwuregwu. N'ihi nrụgide anụ ahụ n'oge ahụ, Oliseh jiri oge ọ bụla o nwere n'oge ezumike n'etiti klas iji kpọọ bọl.
N'ụlọ, ọ na-egwu maka ihe ọ bụla. Dika Oliseh si etinye ya; "Site na mgbe m bụ nwata, e nwere mpi maka ihe ọ bụla. E nwere asọmpi maka nri, asọmpi maka ịhụnanya nke ndị mụrụ m, asọmpi maka ịnọdụ ala na sofa, -ọ bụrụ na ịnọghị n'isi ụtụtụ, ị ga-ekiri VILLAGE HEADMASTER n'ala. Emere m mpi a n'ụlọ akwụkwọ. "
Enweghị ụlọ ọrụ telivishọn na-aga n'ehihie, Ya mere, Oliseh ga-eso ndị enyi ya na-egwu bọl na iji hụ na ọ laghachiri tupu nna ya alọghachi ọrụ. Nna ya na-ele ya anya mgbe ọ hụrụ ya ka ọ na-egwu bọl. Mr Oliseh Snr amachibidoro nwa ya nwoke ịgba egwu n'ihi nkwenkwe na ọ dịghị ego, njikọ na nkwenkwe na ọ maara na ọ dịghị onye na-eme ezigbo ndụ na football.
Sunday Oliseh Child Story Plus Ihe na -Na-eto Eto
Oliseh football dị iche mgbe ya na ndị enyi ya na-egwuri egwu n'ihi na o tinyere otutu ihe mgbagwoju anya nke ndị enyi ya na-apụghị ime. Ihe dị iche n'etiti ya na ndị enyi ya bụ ikike ya itinye 'Jogo Bonito' nke pụtara ịnye ntụrụndụ dị iche iche na ihe ndị na-eme egwuregwu kacha mma. Usoro a sitere na Pele ma emesia site na Neymar.
Oliseh nọgidere na-egwu egwuregwu maka egwuregwu, obere ihe ọ maara na football ga-ewepụ ezinụlọ ya ịda ogbenye. O mere na, n'otu oge na ndụ ya n'ụlọ akwụkwọ (ijikọta ụlọ akwụkwọ ma na-egwu maka ụlọ ọgbakọ ya), Oliseh kwụrụ ụgwọ mbụ ya site na ụlọ ọrụ ya. Ngwa ngwa, o weghaara ego n'ulo ya inye nna ya nke na-ajughi ya anya kama o kpotara umuaka ya ndi ozo; ""A na-akwụ ụgwọ nwanne gị karịa ka akwụre m ụgwọ dị ka onye na-akwụ ụgwọ ". Nke a bụ mgbe Oliseh Snr malitere inwe okwukwe na nwa ya nwoke.
N'afọ 1990, mgbe Julius Berger Fc nọ na ụlọ akwụkwọ, Oliseh natara akwụkwọ ịkpọ òkù Mr. Claude Bissot, (ka nkpuru obi ya di nma we dina n'udo) Onye Belgium, na Belgium maka ule. afọ bụ 1990. Na 1st nke July 1990, na njem ụgbọ elu Switzerlandair na Brussels site na Zürich, Oliseh gara na ihe niile o nwere bụ $ 50, akpa egwuregwu Adidas, akpụkpọ ụkwụ ụkwụ, ihe ole na ole na isiokwu ya kachasị ọnụ, "Akwụkwọ Nsọ ".
N'ịga Belgium, Oliseh ghọtara na a kwadebeere ya ọzụzụ mbụ. O juru ya anya na ọzụzụ ahụ kwụsịrị ngwa ngwa, onyeisi ụlọ ọrụ ahụ wee kpọọ onye ọcha ahụ bụ onye kpọtara ya."Site na nkọwa ị nyere nwata a, Anyị chere na ọ dị mma, ma amaghị na ọ dị ezigbo mma. Anyị kwenyela ịbanye ya ". O juru anya na onye uweojii a juru Oliseh banye na otu onye mbụ na RFC Liege. Nke a bụ otú Oliseh si nọrọ na Europe ruo mgbe ebighị ebi.
Oliseh nwetara enyemaka nke Stephen Keshi (na-egwu na Anderlecht n'oge ahụ) onye nyeere ya aka idozi na Belgium. Mgbe ụbọchị Oliseh bidoro ịmalite nzukọ ya, otu onye nkụzi ya kpọrọ ya, sị ya, "M agaghị nwee ike igwu egwu gị mgbe mgbe na ị naghị asụ asụsụ Belgium ". Mgbe Oliseh nụrụ nke ahụ, ọ na-ewute ya, na-ekwu n'obi ya "N'ịbụ onye maara na m na-asụ asụsụ [Ika Lanuage] nke bụ nke obere mmadụ na Nigeria, Ugbu a, lee m, ịnọ n'etiti ndị nta". Oliseh ngwa ngwa gafere n'okporo ụzọ wee gaa ịzụta akwụkwọ asụsụ. N'ikpeazụ, ọ bịara mara otú e si asụ French, German, Italian and Dutch. Ọ hụrụ onwe ya na-egwu na klọb 8, gụnyere Ajax, Juventus na Dortmund. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Sunday Oliseh Child Story Plus Ihe na -Ndụ mmekọrịta
N'okpuru nwoke ukwu ọ bụla, e nwere nnukwu nwanyị, ma ọ bụ ya mere okwu ahụ na-aga. N'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị ọgbọ egwuregwu Nigeria nile nke Atlanta 1996, e nwere ezigbo nwunye ma ọ bụ onye hụrụ n'anya. Oliseh hụrụ Hafidah n'anya, nwanyị Etiopia na onye Belgian n'oge ọ bụ nwata. Ọ lụrụ ya mara mma Belgian Moroccan nwunye, Hafidahh obere oge mgbe 1994 World iko. N'okpuru ebe a bụ foto nke abụọ ịhụnanya ụmụ nnụnụ.
Di na nwunye ahụ emeela ihe karịrị 20 afọ nke alụmdi na nwunye ma ha nwere ụmụaka mara mma abụọ; nwa Denzel na nwa nwanyị. N'okpuru ebe a bụ foto 2015 nke Denzel Oliseh na nwanne ya nwanyị.
Oliseh kwuru banyere nwunye ya ozugbo."Nwunye m bụ onye na-adịghị ahụkebe na onye pụrụ iche na-enweghị ya, enweghị m ihe ọ bụla. Mgbe m na-arụsi ọrụ ike dị ka ndị na-agba ọsọ, ọ nọ n'akụkụ m n'akụkụ, karịsịa dị ka onyeisi ụlọ. " Oliseh kwuru na nwunye ya na ụmụ ya na-ewe iwe maka iji ego nke ya maka Nigeria Football Federation mgbe ụlọ ọrụ ahụ mebiri.
Sunday Oliseh Child Story Plus Ihe na -The ThunderBolt Shot
Otu ihe echetara banyere Sunday Oliseh bụ ihe mgbaru ọsọ ya na egbe egwuregwu n'etiti Nigeria na Spain na 1998 World Cup nke mere ka Nigeria nweta mmeri. A kọwara ogbugba ahụ dị ka ihe mgbawa ebe ọ bụ na 25 na-agbapụ ya n'ime ụgbụ ahụ, na ihe ijuanya nke onye na-eche nche na Spanish.
N'ụzọ na-akpali mmasị, ọ bụ ọrụ ya na ụbọchị ahụ nke jidere anya nke ndị Italy na-achụ nta na nkwụsị.
Sunday Oliseh Child Story Plus Ihe na -Atlanta 1996 Akụkọ nke
Na Atlanta 1996, Naijiria dara ogbenye dị ka ụkọchukwu. Ọ dịghị onye maara na ha ga-enweta nke ahụ. Ndị otu ahụ rutere nkwụsịtụ na Atlanta ma chọpụta na ọ dịghị ndokwa nkwari akụ maka ha. Ha na-anọ na Motel, ebe ndị mmadụ na-ewere enyi nwanyị ha na ndị nwanyị na-eme onwe ha inwe oge. Na isi ụzọ gafee, e nwere ụlọ kpakpando ise, ebe ndị ọrụ Brazil na Argentina nọ. Mgbe Nigeria nọ na-eme egwuregwu na Brazil, ndị ohi na-agba ọsọ n'ụlọ nkwari akụ Brazilian nọrọ ma na-apụnara ndị agha South America otu ihe onwunwe ha. Òtù ndị Brazil meriri $ 55,000 maka ihe ọ bụla, ndị Niger anaghịkwa efunahụ ihe ọ bụla.
Mgbe Olympics gasịrị, Oliseh gara Ajax. Ọ ghotara ndị na-agba ọsọ na 3 nke kachasị na Afrika n'Africa site na CAF niile site na nkwado ya mgbe ọ ghọworo onye na-edo ọlaedo na Atlanta 1998.
Sunday Oliseh Child Story Plus Ihe na -Na-agba ọsọ na Nigeria
O kwuru na Oliseh na-atụ egwu mgbe niile na ụfọdụ ndị bụ otu mgbe ọ nwụsịrị mgbe ọ bụ onye nchịkwa mba Nigeria. Mgbe o kwusịrị nje na otu n'ime ọrụ ya, ndị ọkachamara mara ọkwa na onye mbụ na-akpọ Juventus ekwuola na ndị iro ya na-eme anwansi na ndụ ya ma kwe nkwa ịgbaga n'ebe dị anya site na mba ahụ ruo ebe ha na-enweghị ike ịgba iji wakpo ya. N'okwu ya ...
"Otu ụbọchị ka ị na-azụ Super Eagles na stadium Abuja tupu oge egwuregwu Burkina Faso, enwere m mmetụ na mberede, isi iyi isi, isi ọwụwa na enweghị ike iguzo. M jisiri ike gwụchaa nnọkọ tupu ị kpọọ dọkịta n'ime ụlọ m bụ onye na-amaghị ihe na-eme. Na mberede, amalitere m ileru ụra ehi ụra, ụkọ agụụ, ọbara mgbali elu tupu mụ amara na amalitere m ibulata. Mgbe ọtụtụ nleta na ndị dọkịta na mba ọzọ, a chọpụtaghị ihe ọ bụla, ha enweghị ike ịchọpụta ihe kpatara ọrịa ahụ n'ezie.
Tupu njem njem ahụ na Burkina Faso maka egwuregwu ikpeazụ CHAN na qualifier egwuregwu na Port Harcourt mgbe nri ehihie gasịrị, mwakpo ọjọọ nke mwakpo ime mmụọ metụrụ m ọzọ. Oge a, enweghi m ike ije na ikwu okwu. Enwere m nsogbu. Ọ dị m ka m ga-apụ. M ozugbo gbagara Germany maka nlele. Ndị dọkịta na-enyocha m na-egosi na m agbapụla kpamkpam na njedebe zuru oke na Nigeria. N'oge a, m furu efu asaa. Obi na-atụ ndị ezinụlọ m egwu, ha niile na-atụkwa egwu kachasị njọ.
Otu ihe doro anya: ọ bụrụ na mụ ejighị njem mgbede ahụ gaa Germany mgbe m mere, enwere ike ịme ihe dị njọ karị. Kelee Chineke maka ebere ya, "
"Ọ na-atụ egwu mgbe niile n'ụlọikwuu ma na-enyo ọbụna ndị òtù ya enyo nhazi ndị ọrụ ", bụ ihe na-eme ka otu onye mara. Isi iyi a kwuru na onye nkuzi a na-ekwu okwu na-ebutere ya agha ma gwa ha na ọtụtụ ndị amoosu na ndị ọkachamara na-agbalị imebi ihe ịga nke ọma nke ndị Eagles.
"Ọ dọrọ aka ná ntị na ndị na-atọ ụtọ ịmịnye aka ha ma ọ bụ mkpịsị aka ha n'akpa tupu ha amaa ya ka ọ kwụsị ma ọ bụ jide aka ha ka ọ na-atụ egwu na ha na-emetụ ihe ezobe na akpa ha tupu ha enyefe ya aka", Sị, sị.
Sunday Oliseh Child Story Plus Ihe na -Ndụ Ezinụlọ
Dị ka e kwuru na mbụ, Oliseh sitere na ezinụlọ dị ala n'etiti ndị ọzọ. Nna ya bụ onye na-akwụ ụgwọ na ọ bụ nrọ ya ịgbaso nzọụkwụ nna ya. Ọ bụ Football nke a na-emetụta n'ụzọ.
Ụmụnne ya ndị tọrọ ya, Azubuike na Egutu, bụkwa ndị na-agba ụkwụ na ụzụ. Nwanne ya nwoke okenye, Churchill Oliseh na-etinyekwa aka na football. Churchill (foto n'okpuru) bụ onye nwe FC Ebeidei. Foto ndị Churchill jirila ndị omempụ nke Naijiria mee ihe na-eme ka ndị na-eto eto na-achọ ịkwaga European Football. N'okpuru ebe a bụ foto nke ụmụnna Oliseh.
Dị ka ihe a na-enyo enyo, Sunday Oliseh bụ onye debere ụmụnne ya nile. O kwenyeghi inye ego nye ndi ezinulo ya mana o kwenyere n'inwe ulo na ndi enyi ya. A na - agọzi oliseh site na otu nwanna nwanyị aha ya bụ Tessy bụ onye na - emepụta ihe na onye na - emepụta ihe n'azụ Tesslo Concept. Ọ lụrụ di na nwunye Ohimai Amaize dị n'okpuru ebe a.
Sunday Oliseh Child Story Plus Ihe na -Ọrụ na-ada
N'agbanyeghị na ndị Nigeria na-achị Nigeria n'oge 2002 African Cup of Nations, e wepụrụ Oliseh site n'òtù egwuregwu World Cup nke mba ya mgbe afọ ahụ gasịrị maka ịdọ aka ná ntị. Mgbe Oliseh nwụsịrị na nchịkwa ụwa, Oliseh lara ezumike nká site na bọlbụ ụwa na June 2002 n'ihi na ọ na-eduga ìgwè ahụ ka ha choro ụgwọ na-akwụghị ụgwọ na ụgwọ a ga-akwụ. Oliseh kwuru banyere egwu egwu na Naijiria."Maka otu ndị Naijiria, oge ị na-egwu egwu egwuregwu mbụ gị, a ga-akpọ gị oke egwu. Oge ị na-egwu egwu egwuregwu mbụ gị, ọbụna ndị mụrụ gị nwere ike ịkpọ gị ka ị kwuo na ị tinyela ha ná nsogbu "
Na March 2004, a kwụsịtụrụ Oliseh na Borussia Dortmund kpochapụrụ mgbe ọ nwụsịrị-na-eme ka ndị mmadụ na-akpakọrịta Vahid Hashemian ka a na-agbanye ego na VfL Bochum na-ekwu banyere agbụrụ. Na Jenụwarị 2006, mgbe ọ dị afọ 31, Oliseh lara ezumike nká mgbe ọ kwụsịrị ọkara oge maka KRC Genk.
Sunday Oliseh Child Story Plus Ihe na -Akwụkwọ ezumike nká
Dị ka bọl bọl, ihe kachasị njọ nke nwere ike ime otu bụ ezumike nká. Mgbe onye ọkpụkpọ bọl na-ala ezumike nká, ndị ikom 65 afọ ka na-akpọ ha ụmụ ọhụrụ. Nke a bụ ikpe nke Sunday Oliseh.
Ka Sunday Oliseh lara ezumike nká, ndị ezinụlọ ya ka na-atụ anya ya maka nkwado ego. N'ịchọ ka ọ ghara ịkụ, Oliseh gwara onwe ya, sị, "E nwere otu ụzọ iji mee ka ọ na - aga n'ihu; ... gụchaa akwụkwọ.". Oliseh gara North England iji gaa n'ihu na agụmakwụkwọ ya maka ị nweta akwụkwọ ikikere ọkachamara UEFA nke na-efu ya ọtụtụ ego. Ka nke ahụ nọ na-aga n'ihu, ọ malitere njem ọzọ site na ịghọ ọkachamara egwuregwu maka TV Television, CNN ma na-arụ ọrụ maka FIFA dị ka akụkụ nke ìgwè ọmụmụ ihe.
Oliseh adịghị mgbe ọ lara ezumike nká. N'adịghị ka ọtụtụ n'ime ndị enyi ya, ikpe Sunday bụ ihe dị iche. Ekele nye nwunye ya, ezinụlọ ya mepụtara ezigbo eji emefu ego. Karịsịa, ịmalite ọrụ ịkụziri ya aka nyere ya aka izute ihe ndị ezinụlọ ya na ndị enyi ya chọrọ. Oliseh ejiriwo na-arụ ọrụ nke ọma dị ka onye na-elekọta football site n'ịga n'ihu ịkụziri ya ihe niile na football. Ịnara ọzụzụ na afọ atọ na ịnye ya na Ntụ akwụkwọ na Business Management nyere ya aka.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ ụbọchị Sunday Oliseh Childhood akụkọ na akụkọ eziokwu ndị ọzọ. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya na isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị !.
Akara Akwukwo Igbo
Tare Machị 13, 2019 Elekere 8:22 nke ụtụtụ
Kedu ka m ga-esi kpọtụrụ gị?
Sami Khedira Ụmụaka Akụkọ nke Gbasara Eziokwu na-enweghị isi
Ousmane Dembele Childhood Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Bọchị agbanweela: Septemba 4, 2020
Axel Witsel nwa akụkọ akụkọ ihe omuma